Brainmachines को प्रभावकारिता बुझ्ने - Mind Alive - मानसिक स्वास्थ्य र विश्राम
के तपाईं कहिल्यै को सुनेका brainwave entrainment पहिले? यो तपाइँको कार्य गर्ने तरिका सुधार गर्न तपाइँको मस्तिष्कको दुबै गोलार्ध समक्रमण गर्ने एउटा तरिका हो। यो प्राय जसो बिनौरल बिट्स भनिन्छ प्रयोग गरेर गरिन्छ, दुबै कानमा दुई अलग टोन, जसमध्ये एउटा अलिक फरक भिन्नतामा हुनेछ। मानव मस्तिष्कले त्यसपछि दुवै गोलार्ध समन्वयन गर्न कोशिस गर्दछ जब यो टोन सुन्छ। तिनीहरू यस्तै समान छन्, यद्यपि यो दुबै पक्षहरू समक्रमण गर्न बाध्य हुनेछ। त्यसो गर्दा, तपाईंले याद गर्नुहुनेछ कि केहि मुद्दाहरू जुन तपाईंले पहिले पाउनुभएको थियो सुधार गर्न थाल्न सक्नुहुन्छ। मस्तिष्कको दुबै गोलार्धलाई सन्तुलनमा राख्ने यो अवस्था ब्रेनमैचिन प्रयोग गरेर पूरा गर्न सकिन्छ।
ब्रेन मेशिनहरू केको लागि प्रयोग गरिन्छ?
यी मेशिनहरू तपाइँको दिमागको दुबै गोलार्धहरू समक्रमण गर्न विशेष रूपमा डिजाइन गरिएको हो। तिनीहरूलाई उपयुक्त नाम दिइएको छ किनकि तिनीहरूको प्राथमिक कार्य यो समक्रमणलाई प्रेरित गर्नु हो। यसले डुअल टोनको साथसाथै आँखा पट्टिहरू पनि समावेश गर्दछ, जुन तपाईं बाह्य संसारको अनुभव जुन तरिकाले बढाउन सक्छ। ध्वनि मस्तिष्क प्रवेश गर्न डिजाइन गरिएको छ, जबकि प्रकाशको अभाव किनभने pineal ग्रंथि अधिक melatonin उत्पादन गर्न सक्छन्। यी दुबै कारकहरूको संयोजनले कम तनाव, कम चिन्ता, र तपाईंलाई सजिलै चीजहरू सजिलै याद गर्न मद्दत गर्न सक्छ। यी धेरै लोकप्रिय मस्तिष्क मेशिनहरू प्रयोग गरेर धेरै अन्य लाभहरू सम्बन्धित छन्।
मस्तिष्क मेसिन प्रयोगका फाइदाहरू
ब्रेनवेभ ईन्टरमेन्ट मेशिनहरूले तपाईंलाई बिभिन्न ब्रेनवेभहरू प्राप्त गर्न मद्दत गर्न सक्षम छन्। उदाहरण को लागी, तपाइँको सामान्य जागृति स्थिति मा, तपाइँको मन छोटो तरंगहरु संग काम गरीरहेको छ बीटा तरंगहरु। तपाइँको दिनको बारेमा जान लागी यिनीहरूले तपाइँको दिमागमा प्रभुत्व जमाउँछन्। अर्कोतर्फ, अल्फा तरंगहरू धेरै लामो हुन्छन्, र तिनीहरू उपस्थित हुन्छन् जब कोही सतर्क, शान्त, र समन्वयित हुन्छन्। जब तपाईं प्रयोग गर्नुहुन्छ brainwave entrainment टेक्नोलोजी, तपाईं आफ्नो मस्तिष्कको दुबै गोलार्ध समन्वय गरेर बीटाबाट अल्फामा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। तसर्थ, यसको सट्टा जस्तै औषधि समाधानको लागि फार्मास्यूटिकल समाधान प्रयोग गर्नु भन्दा अनिद्रा, एडीएचडी, वा प्रगतिशील विस्मरण पनि, तपाईं यो टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर यो गर्न सक्नुहुनेछ।
अन्य सर्तहरू जुन यो समाधान हुन सक्छ
यदि तपाईंसँग अन्य प्रसंगहरू छन् जुन यस प्रविधि प्रयोग गरेर समाधान गर्न सकिन्छ दुख दर्द घटाउन, ध्यान घाटा विकारको साथ मद्दत, र hyperactivity साथ पनि मद्दत गर्न सक्छ। जो तनावग्रस्त छन् र औषधि सेवन गरिरहेका छन् उनीहरूले दैनिक यस प्रविधि प्रयोग गरेर ठूलो फाइदा लिन सक्छन्। चिन्ता, वा अन्य मनोवैज्ञानिक वा मनोवैज्ञानिक समस्याबाट ग्रस्त व्यक्तिहरू, उनीहरूले हालसालै पीडा भोगिरहेका अवस्थाहरूमा सुधार ल्याउने उपायको रूपमा यसलाई विचार गर्न सक्छन्।
Brainmachines धेरै कम्पनीहरू द्वारा बेचिन्छ जुन यस प्रविधि वर्ष बर्ष सुधार हुँदैछ। तपाईं मनको यी बिभिन्न राज्यहरू प्राप्त गर्न सक्षम हुनुहुनेछ अफसेट ड्युअल टोन सुनेर र तपाईंको आँखामा प्रकाश पाउनबाट रोक्दै अरू बढी केही नगर्दै। तपाईं यी धेरै बिक्रीको लागि फेला पार्न सक्नुहुन्छ, समीक्षाका साथ कसरी उनीहरूले अन्य धेरै व्यक्तिलाई मद्दत गरे। यदि तपाई आफ्नो जीवन सुधार गर्न चाहानुहुन्छ भने तपाईले त्यो पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ brainwave entrainment टेक्नोलोजी तपाईंले खोज्नुभएको समाधान हुन सक्छ।